आजको राशिफल / २०७६ आषाढ २१ गते शनिबार - Purbeli News
बुधबार, आश्विन २९, २०७६
Trending # मृत्यु67# राशिफल37# पक्राउ36# नेकपा32# मृत्यु30# न्युरो अस्पताल26# दशैं23# दुर्घटना20
आजको राशिफल / २०७६ आषाढ २१ गते शनिबार
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २१, २०७६ समय: ५:२५:५५
वि.सं. २०७६ आषाढ २१ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जुलाई ०६ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, गृष्म ऋतु, आजको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), आषाढ शुक्लपक्ष (दिल्लाथ्व) चतुर्थी तिथि, दिउँसो ०४:३२ बजेसम्म, त्यसपछि पञ्चमी तिथि, मघा नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि ०२:११ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), वज्र योग, बिहान ०५:१७ बजेसम्म, त्यसपछि सिद्धि योग, सुरुमा वणिज करण बिहान ०५:४४ बजेसम्म, त्यसपछि विष्टि (भद्रा) करण दिउँसो ०४:३२ बजेसम्म, अन्तिममा बब करण, आनन्दादि योग : पद्म, चन्द्रवर्ण : रातो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा : नैऋत्य, वारशूल : पूर्व, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:१५ बजे, सूर्यास्त : साँझ ०७:०१ बजे, दिनमान : ३४ घडी २५ पला (१३ घण्टा ४६ मिनेट, रात्रीमान : २५ घडी ३५ पला (१० घण्टा १४ मिनेट)
राहु काल : बिहान ०८:४२ देखि १०:२५ सम्म, यमघण्ट : दिउँसो ०१:५१ देखि ०३:३५ सम्म, गुलिक काल : बिहान ०५:१५ देखि ०६:५८ सम्म, काल वारवेला : बिहान ०५:१५ देखि ०६:५८ सम्म र साँझ ०५:१८ देखि ०८:१८ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०६:५८ देखि ०८:४२ सम्म, अमृत वारवेला : दिउँसो ०३:३५ देखि ०५:१८ सम्म, आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा ईशान (उत्तरपूर्व) र आग्नेय (दक्षिणपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
एकाबिहानै केही महत्वपूर्ण घरायसी काममा समय व्यतीत गर्नु पर्नेछ, जसबाट भविष्यमा राम्रो फाइदा पुग्नेछ । दिउँसोबाट ज्ञानगुन र दार्शनिक विषयमा आकर्षित भइने छ, कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ । आत्मबलमा अझ बृद्धि हुनाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी स्याबासी पाउन सक्नेछन् र अन्य सबैले ज्ञानगुन, अध्यात्म र दर्शनका विषयमा आकर्षण देखाउने छन् । कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । गृहिणीहरूमा भाइबहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । कामदार र कर्मचारीले आत्मोन्नतिको अवसर पाउने छन् ।
शुभरङ्ग : आकासे
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ वाग्देव्यै नमः
के गर्ने : आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयको ज्ञान लिने
के नगर्ने : अहङ्कार
चौथो घरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले घरपरिवारसँगै बस्नेहरूका लागि आजको दिन गतिलो छैन, अनावश्यक दौडधुप गर्नु पर्नेछ, काममा किसिमकिसिमका चुनौती देखा पर्नेछन्, नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । शरीरमा आलस्य जाग्नेछ । प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ । तपाईंले चिताएको काममा अप्ठ्यारा र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । विपरीतलिङ्गी साथीबाट मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ । मन पापमतिमा आकर्षित हुन बेर लगाउँदैन, संयम हुनुहोला । छात्रछात्रा कल्पना र भावनामा रुमल्लिने समय छ । गृहिणीहरूमा दिकदारी बढ्ने छ । तर आज देशपरदेशमा रहनेहरूले केही हदमा सकारात्मक फल प्राप्त गर्नेछन् ।
शुभरङ्ग : कलेजी
इष्टदेवता : अष्टमातृका
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ अष्टमातृकाभ्यो नमः
के गर्ने : आमाको वा बृद्ध स्त्रीको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने
आत्मीयजनहरूसँग भेटघाट हुनेछ । चाहनाबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकिने छ । मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । साथीभाइ र बन्धुबान्धवले सहयोग गर्नेछन् । यात्रा सम्पन्न र सफलतम सिद्ध हुनेछ । सामाजिक काममा दौडधूप हुनसक्छ, मान पाइने छ, राज्यपक्षबाट सम्मानित हुने अवसर मिल्नेछ । धार्मिक, सामाजिक काम वा परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्ने समय आएको छ । उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ । बन्दव्यापारका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज त्यसका लागि अनुकूल समय छ । भाइबहिनीका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना समेत छ । छात्रछात्राले प्रतिष्ठा पाउने समय हो भने गृहिणीहरूको मन फुरुङ्ग हुनेछ ।
शुभरङ्ग : हरियो
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ कार्यविनायकाय महागणाधिपतये नमः
के गर्ने : परोपकारी र सामाजिक काममा मन दिने
के नगर्ने : दुःखीको अपमान
आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै सम्पत्तिसम्बद्ध समस्याहरू समाधान हुनेछन् । काममा सफलता पाइने छ । गृहिणीहरूलाई पारिवारिक खुसी मिल्नेछ, नन्दआमाजु र करकुटुम्बले राम्रो सहयोग गर्ने छन् । विभिन्न सामाग्री किनमेल गर्न आजको दिन राम्रो छ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईंको वाणि र व्यवहारप्रति विपरीतलिङ्गीको आकर्षण बढ्नेछ । भौतिक सम्पत्तिको जोहो हुनसक्छ । बन्दव्यापारमा संलग्न हुनेहरूले दीर्घकालिक लगानीका लागि उत्सुक हुनुहुन्छ भने आज राम्रो दिन छ । विद्यार्थी गफगाफमा केन्द्रित हुँदा पढाइ बिथोलिने सम्भावना देखिन्छ । तर आज तपाईंको बोलीको कदर हुने दिन हो, महत्वपूर्ण स्थानमा बोली बिक्नेछ ।
शुभरङ्ग : सेतो
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ सिद्धिलक्ष्म्यै नमः
के गर्ने : चेलीबेटी र कुटुम्बसँग नम्र व्यवहार गर्ने
के नगर्ने : फजुल खर्च
हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुनेछ । बढी चञ्चलता र उमङ्ग देखाउनु हानिकारक बन्न सक्छ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले अध्ययन–अध्यापन र पेसा/व्यवसायको क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ । मन उत्सुक र आशावादी बन्नेछ । महत्वाकाङ्क्षा र इच्छा जाग्नेछन्, तर इच्छा पूर्ण गर्न लगनशीलताका साथमा मिहिनेत गर्नु राम्रो हुनेछ । झिनामसिना र बेकामे वस्तुको किनमेलमा धनखर्च हुनेछ । नरमाइलो दिक्कलाग्दो यात्राको सम्भावना छ । समग्रमा दिन राम्रो नभए पनि कताकता कुनै कुराको कमी भएको महसुस हुनेछ । जुनसुकै क्रियाकलापमा धैर्य र संयम हुनु आवश्यक देखिन्छ, किनभने कार्यक्षेत्रमा विवाद हुने तथा घरपरिवारमा झैझगडा हुने दिन छ ।
शुभरङ्ग : गुलाबी
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ अं अङ्गारकाय नमः
के नगर्ने : कल्पनामा र भावनामा डुब्ने काम
दिउँसोका तुलनामा बिहानको समय बढी सकारात्मक देखिन्छ । सुरुमा मनमा उत्साह र उमङ्ग देखिए पनि चन्द्रमा बाह्रौं घरमा रहने हुँदा आत्मबलमा कमी देखिन सक्छ, तर शरीरमा स्फूर्ति, उत्साह र उमङ्गलाई नत्याग्नु राम्रो हुन्छ । छरछिमेकी वा साथीभाइले काममा सहयोग गर्नेछन् । अप्ठ्यारामा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्दा धन खर्च हुनेछ । शुभकार्य वा दानपुण्यमा मन आकर्षित हुनेछ । रमाइलो र सार्थक यात्राको योग छ । घरभित्रका समस्या हल गर्न आर्थिक व्ययभार बढ्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ । गृहिणीहरूमा दिन छिप्पिंदै जाँदा तनाव र चिडचिडेपन बढ्न सक्छ । कर्मचारी र कामकाजी व्यक्तिले रिसराग र प्रतिशोधको भावना त्याग्नु राम्रो हुनेछ ।
इष्टदेवता : कुल/पितृदेवता
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ बृं बृहस्पतये नमः
के गर्ने : खर्र्चमा नियन्त्रण
के नगर्ने : विलम्ब र ढिलासुस्ती
चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुने छ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । भाइबहिनी वा सन्ततिका कारण खुसीको वातावरण बन्नसक्छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइले तपाईंका कामधन्धामा सहयोग पुर्याउने छन् । साथीभाइको राम्रो सल्लाह र सद्भावना प्राप्त हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागी बन्नु पर्नेछ र त्यसबाट प्रशंसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । समाजसेवाबाट वा साथीभाइको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ । अपूरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । छात्रछात्राको ज्ञानविज्ञान र चिन्तनमननमा समय बित्नेछ । विपरीतलिङ्गीसँग विनम्र भावले व्यवहार गर्दा राम्रो हुनेछ । गृहिणीहरूले छरछिमेकीका काममा खट्नु पर्ने समय छ ।
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ सूर्यसुताय शनये नमः
के गर्ने : बन्दव्यापार र लाभमूलक काममा लगानी
के नगर्ने : अनुशासन भङ्ग
आम्दानीमा कमी आउने छैन । आत्मविश्वासमा अभिबृद्धि हुनेछ । मातापिता र अभिभावक वर्गसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनेछ । कर्मचारीले प्रशंसा पाउने छन् । घरायसी काममा दिलचस्पी बढ्ने छ । व्यवसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ, तर चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सत पाउनु हुन्न । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न नसक्नाले थोरै तर सम्हाल्न सकिने नमिठोपना आउने सङ्केत भने देखिन्छ । गृहिणीहरूलाई आफन्तहरूले मनले चाहेजस्तै सहयोग गर्नेछन् । छात्रछात्राले परीक्षा र प्रतियोगितामा सफलता आर्जन गर्ने समय छ । कर्मसिद्धिको समय छ । कर्मप्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् ।
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ कुलदेवताभ्यो नमः
के गर्ने : जग्गाजमिन र घरायसी बन्दोवस्तीको प्रयास
के नगर्ने : अल्छीपन र अकर्मण्यता
धार्मिक/सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । मानसम्मान र प्रशंसा प्राप्त हुने सम्भावना छ । पारिवारिक समस्याहरू हल हुनेछन् । घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता आउने छ । रोकिएका काम सुरु गर्ने वातावरण बन्नेछ । आर्थिक पक्षमा टेवा पुग्नेछ । सामाजिक कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुनेछ । टाढा रहेका आफन्तजनको उन्नति र प्रगतिको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । मान्यजनको आशीर्वाद पाउनु हुनेछ । लामो दूरीको यात्रामा निस्कन वा यातायातको साधन किन्न आजको दिन अनुकूल छ । गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ । धार्मिक र परोपकारी क्रियाकलापप्रति झुकाव राखेमा सबैको भलो हुने दिन छ ।
शुभरङ्ग : गाढा पहेंलो वा केशरी
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ धर्मराजाय नमः
के गर्ने : धार्मिक, सामाजिक र परोपकारी काम
के नगर्ने : अपमान
अष्टमस्थ चन्द्रका कारण गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिने समय हो, गर्न बाँकी काम पनि आजलाई थाती राख्नु नै बेस हुनेछ । अनावश्यक यात्रा हुनेछ वा छोटो दूरीको निरर्थक यात्रा हुने योग छ । कर्मचारीले हाकिमसँग, छात्रछात्राले गुरुजनसँग र गृहिणीहरूले मान्यजनसँग विवाद गर्नुपर्ने हुनसक्छ । युवा र किशोरकिशोरीमा गुप्त र मानसिक रोगले सताउन सक्छ । सबैका लागि झिनामसिना घरायसी कामको चाप बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । अनाहकमा अरुले गरेका गल्तीको सजाय आफूले भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । साथीभाइ टाढिन सक्छन् ।
इष्टदेवता : भगवान् महादेव
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ मृत्युञ्जयाय नमः
के गर्ने : आवेग, संवेग, रिसराग र क्रोधमा नियन्त्रण
के नगर्ने : सट्टापट्टा र जोखिमपूर्ण काम
लामोसमयदेखि देखिएका उल्झन सुल्झाउने महत्वपूर्ण दिन हो, आज । कामदार र कर्मचारीले पेसा वा व्यवसायमा देखिएका असजिला पक्षको निराकरणका लागि गरेको प्रयास सफल हुनसक्छ । छात्रछात्रा तर्कवितर्क, वादविवाद, छलफल र पढाइलेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय हुनेछन् । प्रायः सबैका लागि दिन भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ । प्रणयसुखका लागि अनुकूल समय छ, प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । साझेदारी वा पार्टनरसीपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि आज अनुकूल छ । सोच्दै नसोचेका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै शरीर फुर्तिलो रहने समय छ ।
इष्टदेवता : राधाकृष्ण
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ कामदेवाय नमः
के गर्ने : पति/पत्नी र प्रेमी/प्रेमिकाको भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्ने
के नगर्ने : कामुकता
बिहान ज्ञानगुनका क्षेत्रमा मन आकर्षित भएपनि दिउँसोबाट समय अलि धमिलिएको महसुस हुनेछ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा तल्लीन भइने छ । पारमार्थिक काममा खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ । बन्दव्यापारमा ठिकै छ । काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल हुनेछन् । कुनै झैझगडा, विवाद वा तर्कवितर्कमा सरिक भई निर्णय दिन बाध्य हुनु पर्नेछ । दिन छिप्पिंदै जाँदा आर्थिक सन्तुलन गडबडाउन सक्छ, मानसिक तनाव बढ्ने समय हो । स्वास्थ्यमा हलुका असर पर्ने सम्भावना छ, मौसमी रोगव्याधिको सम्भावना देखिन्छ, आहारविहारमा सतर्कता अपनाएको राम्रो हो । छात्रछात्रा झैझगडा र तर्कवितर्कमा आकर्षित हुनेछन् ।
शुभरङ्ग : सेतो वा घुर्मैलो
इष्टदेवता : विष्णु भगवान्
कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ धन्वन्तरीदेवाय नमः
के गर्ने : कुरा काट्ने र प्रतिद्वन्द्वीसित सतर्क रहने
के नगर्ने : मुद्दामामिला र झैझगडा
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तोडफोड प्रकरण : एक युवतीसहित १६ जना पक्राउ
शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमाथि निर्धात कुटपिट (भिडियाे सहित)
अमेरिकामा फेरी कार दुर्घटना, दुई नेपाली महिलाको मृत्यु
कांग्रेसका नेता सहित आठजना जुवाडे पक्राउ
गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी
अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारदेखि
दिदीलाई खुकुरी प्रहार गरी भाइले रेटे आफ्नै घाँटी
बेलबारीस्थित लोहन्द्रा खोलाको पुलमुनि वेवारीशे शव फेला